Nyowani Parla mhinduro kubva kuSpamina, freemium gore tsamba chikuva chemakambani | ECommerce nhau
Nyowani Parla mhinduro kubva kuSpamina, ye freemium gore tsamba chikuva chemakambani
Eva maria Rodriguez | | Zvechokwadi uye nhau, Cloud computing, CMS uye Technology
Hurukuro yeSpamina mhinduro nyowani ye email Zvemabhizinesi. Zviri nezve gore tsamba tsamba mumuenzaniso freemium ine inosvika 30GB yekuchengetedza pane iine mamwe mabasa ekuwedzera uye zvakanakira zvine chekuita nechero ipi email maneja izvo zvinovimbisa iyo wega yebhizinesi data.
Kubva Spamine Ivo vanotenda kuti kufamba, sechinhu chinosiyanisa mumakambani anhasi, kunoda kutsvaga nzira yakanakisa yevashandi vese yekushanda kubva kune chero chishandiso uye chero kupi. Chikuva Hurukuro yeSpamina inopa mhinduro kune ino hunhu hwemakambani anhasi, achifambisa avo kubudirira kumhanya kwekupindura uye kuita.
Parla de Spamina inopa email yemubatanidzwa, makarenda, sarudzo dzekushandira pamwe uye kuchengetedzwa kwakavakirwa-mukati. Mukuwedzera, inovimbisa wega ye data rebhizimusi ine chaiyo mhinduro isina PRISM, chimwe chinhu icho kunyangwe ivo vekuAmerican vanopa vanogona ikozvino kuvimbisa. Kune rimwe divi, nekuda kwekugona kwayo kuisirwa, yakanaka kune ese marudzi emakambani uye eese saizi.
Spamina's Parla mhinduro haisi yakapusa email manejaPane kudaro, iyi software inopa yakakwana, yakachengeteka uye inokurumidza ruzivo kuti ikubatsire zviri nani kubata bhizinesi rako.
Parla inoshanda pane chero komputa kana nhare mbozha ine chinongedzo che data. Uye zvakare, iyo zvakare inokutendera iwe kuti uenderere mberi nekushanda kunyangwe pasina kubatana kune Internet. Iyo mailbox inogona kuwanikwa nevatengi veko senge Outview, uye kubva kumidziyo ine masisitimu anoshanda iOS y Android. Vashandi vanogona zvakare kupinda mukati meiyo Webmail chikuva uko kwavanogona kubata email, kushandisa zvishandiso zvekushandira pamwe, kubata zvinyorwa, kana kubata mabasa.
1 Spamina Parla: Iyo Yakazara Email Solution
2 Spamina Parla, inopfuura email mune freemium modhi
Spamina Parla: Iyo Yakazara Email Solution
Spamine inozivisa kuti yako chikuva Parla ndiyo mhinduro yeemail yakazara pamusika nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka, zvinosanganisira zvinotevera:
Padanho rehunyanzvi, Parla de Spamina inopa zvikamu zvakasiyana zvekuchengetedzeka kwakakwana kubva kumatyisidziro ekunze, zvinosanganisira sarudzo dzakasiyana dzekufamba uye yakasarudzika rutsigiro rwehunyanzvi runowanikwa maawa makumi maviri nemana pazuva.
Iyi chikuva inoshanda kubva kune chero komputa kana nhare mbozha ine internet yekubatanidza, ichikwanisa kuenderera nekushanda kunyangwe ikatadza. Iyo yakanyatsobatanidzwa nemhinduro dzakadai seAptlook, iOS kana Android uye vashandisi vachakwanisa kupinda muWebmail chikuva.
Spamina Parla inokutendera kuti ubate maneja zviri nyore, gadzira zvinodzokorora zviitiko mukarenda, seta zvinyorwa, gadzira uye ugovane manotsi kana kubata bhuku rekero
Parla gwaro maneja rinobvisa kudiwa kwemamwe maturusi akazvimiririra, zvichikubvumidza iwe kurodha chero rudzi rwefaira kubva pakombuta yako padanho rimwe chete, kudzikisa kushandiswa kwekambani network uye yekuchengetedza nzvimbo.
Its ActiveSync protocol inoita Parla otomatiki kuenzanisa data rako rese pane chero iPhone, iPad, Android kana piritsi, uye inogona zvakare kuwanikwa kubva kuSafari kana Google Chrome.
Spamina Parla, inopfuura email mune freemium modhi
Spamina ParlaPamusoro pekugadzirisa tsamba, zvinokutendera kuti ubate manejimendi nyore nyore, govana bhuku rako rekero nevamwe vashandisi, gadzira zvinodzokorora zviitiko mu karenda, set mavara y share makarenda, gadzira uye ugovane zvinyorwa, tenga vashandisi 'inowanikwa / yakabatikana mamiriro uye maneja bhuku rekero, maneja we mabasa uye module zvinyorwa.
Parla gwaro maneja rinobvisa kudiwa kweakasiyana magwaro ekushandisa maturusi uye kururamisa maitiro ekugovana mafaera kuburikidza neemail meseji, kudzikisa kushandiswa kwekambani network uye kuchengetedza nzvimbo
Naiyo maneja wefaira iwe unogona kugovera maforodha pakati pevashandisi uye kurodha akawanda mafaera erudzi rupi nerupi nhanho imwechete kubva kudesktop, maneja wefaira anozoona yega yega faira rakasimudzwa uye otomatiki anopa inoenderana icon inoenderana nerudzi rwefaira.
Parla inosanganisa natively netsamba, vanobatika uye makarenda kunyorera pane chero iPhone, iPad, Android kana piritsi. Pamusoro pekubatanidzwa kwechizvarwa, vashandi vanogona zvakare kuwana maakaunzi avo kuburikidza safari o Google Chrome zvakananga kubva kune avo nhare mbozha.
Parla's Cloud Email Firewall mhinduro inopa mukana wekubatanidzwa ne Cloud Email Kuchengeta uye Encryption & DLP. Nekudaro, Spamina's Cloud Email Archiving sarudzo inobvumira email yemakambani kuti ichengetwe kwemakore gumi, ichipa mukana wekuwana ipapo ipapo. Nezve kubatanidzwa kweCloud Email Encryption & DLP, inobvumidza masangano kuvimbisa kuvanzika kwemaemail avo, kunyorera maemail uye kubvumidza vanogamuchira kuverenga maemail zvisinei nehunyanzvi hwemidziyo yavanayo, mukuwedzera inovabvumidzawo kudzivirira ruzivo rwekuvuza kuburikidza neemail pamwe neiyo yepamusoro DLP module.
Uye zvese kubva ku € 0 pamwedzi ne1 Gb yekuchengetedza, iyo inogona kuyerwa kusvika ku30 Gb. Kuti udzidze zvakawanda nezve kuchengetedza nemitengo, shanyira webhusaiti ye Spamine.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Cloud computing » Nyowani Parla mhinduro kubva kuSpamina, ye freemium gore tsamba chikuva chemakambani
Iyo yekutanga Wayook inoshandura iyo yekuchenesa masevhisi chikamu neayo smart musika
Nharembozha yevatengi maitiro mushumo